Ku hagaaji naqshadda qoraaladaada iyo soo degitaankaaga WordPress adigoo adeegsanaya Shorcodes Ultimate | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah rabitaanka qofkasta markay isticmaalayaan degel lagu sameeyay WordPress in muddo ah ayaa ah in la kordhiyo howlaheeda heer muuqaal ah. Inaad awood u leedahay inaad si dhakhso leh u isticmaasho walxo horay loo sii cayimay iyo awood qaabaynta qoraallada iyo bogagga si xirfadaysan.
Tani waa waddada WordPress uu ku doortay nooca 5, soo bandhigida Gutengerb iyo baloogyadiisa sida tifaftiraha. Laakiin markaan aragnay dhammaan waxyaabaha kale ee suuqa yaal, oo badan, waa inaan ku hakanno a plugin bilaash ah Shortcodes Ultimate. Isku-darka qaybaha muuqaalka oo lama huraan u noqon doona.
1 Waa maxay habka gaaban?
2 Maxaan sameyn karaa
3 Beddelka Shortcode Ultimate
Waa maxay habka gaaban?
Koodhka gaaban waa qayb horay loo sii caddeeyay oo koodh ah oo aan ku dari karno tifaftirahayaga jidka ku jira [lambar gaaban] [/ lambar gaaban] taasina waxay naga caawinaysaa inaan ku darno shaqooyinka wax-soo-saarka. Aad ayey waxtar u leeyihiin maxaa yeelay waxay naga caawinayaan inaan tirtirno ama aan otomaatigno howlaha soo noqnoqda Qiyaas inaan jecel nahay inaan uga digno akhristayaasheena in waxa ay sameynayaan aysan ahayn masuuliyadeena. Hagaag halkii aan siin lahayn qaab markasta oo aan qorno, waxaan abuuri karnaa lambar gaaban [digniin] leh taariikh guduudan, soohdin iyo astaan ​​bidixda ah iyo markasta oo aan ogaysiinkeena dhigno kaliya waa inaan ku duubnaa qoraalka lambarka gaaban waana tarjumi doonaa.
[feejignaan] Feejignaan: Wax kasta oo aad ku aragto balooggan waa in lagu sameeyaa mas'uuliyaddaada [/ feejignaan]
Tanina waa tusaalaha ugu fudud ee dhammaan. Laga bilaabo halkan waxaan ka bilaabi karnaa dhismaha qaabab xigashooyin, fiidiyowyo, markhaatiyo iyo wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca.
Oo haddii aynaan garanayn sida loo barnaamij, laakiin waxaan dooneynaa inaan ka faa'iideysano dhammaan faa'iidooyinka shortcode, waa inaan jiidannaa qalabka :)
Halkan waxaad ka arki kartaa casharro ku saabsan fiilada aad ku heli doontid fikrad ku saabsan awoodeeda iyo kala duwanaanshaheeda iyo sababta ay uga mid tahay waxyaabaha ugu badan ee la adeegsado si loogu daro waxqabadyo leh waxyaabo muuqaal ah oo ku saabsan qoraalladayada WordPress iyo mawduucyada.
Runtii waa mid awood badan. Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa marka lagu daro ku darista qaabab qoraallada barta, si loo dejiyo degsiimooyinka macaamil ganacsi. Waxay ku siin doontaa hawlo aadan malayn.
Hadaad kafekerayso samee degel internet kuu gaar ah si aad ugu hesho faylalkaaga oo is ogow ama inaad ganacsi bilowdid, waa wax aad u fudud, waxaad u baahan doontaa oo keliya domain, martigelin sida martigelinta websaydhka ee Webempresa Ku rakib WordPress mawduuc horay loo sii cayimay oo ku dar waxyaabo dheeri ah sidaad doonto ;-) Shortcodes Ultimate waa lama huraan haddii aad rabto inaad qaab fudud oo awood leh u qaabeyso.
Beddelka Shortcode Ultimate
Sidii aan ka faallaynay, beddelka ugu weyn ee maanta waa tafatiraha cusub ee Gutenberg oo leh aagaggooda iyo wixii laxiriira ee kudarsamaya astaamo gaar ah.
Ikhtiyaarrada kale sida dhismayaasha muuqaalka (Divi, Muuqaalka Muuqaalka, iwm.) Looma daaweynayo inay yihiin beddelaadyo kale, maadaama aakhirka aynaan gelin aqal, gaabin ama wax la mid ah, laakiin waa inaan wax ka beddelnaa dhammaan dhismaha soo degitaanka, soo saarista xirashada baqdinta. Laakiin tan waxaan ku arki doonaa maqaal kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » WordPress » Ku hagaaji naqshadeynta qoraaladaada iyo degitaanadaada WordPress adigoo adeegsanaya Shorcodes Ultimate